प्रेम सम्बन्धि १० मनछुने लाईनहरु - eSuccess Quotes
१. रमाउने भनेको त बचपनमा मात्र रहेछ, जिम्मेवारीले टाउको भारी पछी त चाहेर पनि रमाउन नसकिने रहेछ
२. जिध्दी त सबै हुन्छन् तर झुक्छ त्यहि जसलाई सम्बन्धको चिन्ता हुन्छ
३. यदि प्रेममा पैसाको स्थान हुदैन थियो भने राजकुमारको नाम किन आउथ्यो ? कहिले सुन्नु भएको छ ? मेरो सपनाको मजदुर जन्ती लिएर आउछ भनेर
४. माया गर्ने आँट गरिसके पछी सम्बन्ध टिकाउने शाहस पनि राख्नुपर्दछ
५. जिन्दगी पनि चन्द्रमा जस्तै भएको छ, हेर्दा राम्रो देखिन्छ तर एक्लै छ
६. मानिसहरु हरेक पटक यहि सोध्छन् कि ऊ मा के देखिस ? म हरेक पटक यहि भन्छु की माया बिना कारण हुने गर्छ
७. मानिसहरु बदलिन्छन्, प्रेमले चोट दिन्छ, साथीहरु छोडी जान्छन्, अवस्थाले ढोका दिन्छ, बनाएका सपना तोडिन्छ तर याद रहोस जिन्दगी चलिरहन्छ
८. सारै गाह्रो रहेछ उसलाई भुलाउन जसले तिमीलाई सम्झनको लागी अनेकौ यादहरु दिएको हुन्छ
९. यति बुझ, माया सिसा हो त्यसैले त फुट्दा कम र चर्किदा बढी दुख्ने गर्दछ
१०. आजकल मन बाट होइन दिमाग बाट सम्बन्ध निभाउने गर्छन्
११. मायाको अर्थ मायाँ गर्नेले पो बुझ्छ, नाटक गर्नेले त कहिल्यै बुझ्दैन
१२. चित्त दुखाउने बित्तिकै रोईहाल्नु हुदैन, सबै चित्त दुखाउनेहरु आशुको लायक हुदैनन्
१३. जब बिश्वास टुट्छ नि तब यो सरी भन्ने शब्द पनि मजाक लाग्छ
१४. प्रेम गर्दा चाँही दुबैको सहमति हुनु पर्ने रे अनि बिछोडमा चाँही एक्लै निर्णय गर्दा हुन्छ रे, मायामा पनि कति अन्याय
१५. करोडौको भिड किन नहोस, खोजी सधै एउटै अनुहारको हुन्छ
१६. प्रेमको परिभाषा संग्रालयमा राख्नु पर्छ किनकि यसको अर्थ नै लोप भएर गईसक्यो
Don't Miss it १० लाइनहरु जसले तपाइको मन छुन सक्छ
Up Next जीवनको १० यथार्थ तथा मनछुने भनाईहरु